अवसर पहिचान गर्नसके शेयरबाट निक्षेप भन्दा धेरै रिर्टन पाईने - Sero Fero News
अवसर पहिचान गर्नसके शेयरबाट निक्षेप भन्दा धेरै रिर्टन पाईने
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - २२ कार्तिक २०७८, सोमवार
शेयर बजार र बैंक ब्याजदर एक अर्काका विपरीतार्थ हुन्। ब्याजदर बढ्दा शेयर बजार घट्ने र ब्याजदर बढ्दा शेयर बजार घट्ने मान्यता स्थापित झैँ छ। पछिल्ला बुलिश शेयर बजार र बियरिशले यस्तै देखाएका छन्।
जब जब ब्याजदर घटेका छन्, तब तब नेपाली शेयर बजारले ऐतिहासिक विन्दु छोएका छन्। ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै शेयर बजारले घट्दो लय समाउने गर्छ। जसको उदाहरणको रुपमा गत कार्तिक महिनाको लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि बजारमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको देखियो। बढेको ब्याजदरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नको लागि निर्देशन जारी गरे लगत्तै बजारमा सुधार देखिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गरेपछिको ६ कारोबार दिनमा शेयर बजार मापक सूचक करिब ३०० भन्दा बढी अंकले बजार बढी सकेको छ। जसले पनि बजारमा ब्याजदरको प्रभाव रहने प्रमाणित गर्छ।
शेयर बजारमा ब्याजदरको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो? के साँच्चिकै बैंकहरुले आफ्ना बचतकर्ताहरूलाई दिने ब्याजदर भन्दा शेयर बजार मार्फत हुने लाभमा फरक पर्छ? साँच्चिकै शेयर बजारका लगानीकर्ताले ब्याजदर सित डराउनै पर्ने स्थिति हो? भन्ने विषयमा मेरो लगानीले गरेको अध्ययनमा नेप्सेको वार्षिक प्रतिफल (रिटर्न) र बैंकले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदरमा निक्षेपमा गरिने लगानीको भन्दा नेप्सेको रिटर्न धेरै राम्रो देखिएको छ। मेरो लगानीको अध्ययन अनुसार पछिल्लो चार वर्षको ब्याजदर र नेप्सेको प्रतिफललाई आधार मानेर हेर्दा नेप्से मार्फत हुने लाभ धेरै देखिएको छ।
गत चार वर्षमा नेप्सेको औसत प्रतिफल २५.०८ प्रतिशत छ। सोही अवधिमा निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पाउने अधिकतम औसत ब्याज ६.३१ देखि १० प्रतिशतसम्म रहेको छ। बचतकर्ताले मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक अधिकतम ब्याज औसत १० प्रतिशतसम्म पाएका छन् भने बचतमा प्राप्त हुने ब्याज औसतमा ६.३१ प्रतिशत छ। सोही गणनाको आधारमा बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज भन्दा नेप्सेको प्रतिफल बढी देखिएको हो।
वार्षिक प्रतिफलको आधारमा नेप्सेको रिटर्न बढी देखिएपनि बजारमा बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन देखिन साथ बजारले तत्कालै प्रतिक्रिया देखाउने गर्छ। शेयर बजार र बैंक ब्याजदरको प्रतिक्रिया जहिले पनि विपरीतार्थ हुन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने ब्याजदरले बजारमा निक्कै ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको भरत रानाभाट बत्ताउँछन्। लगानीकर्ताहरूले नेप्से सूचक र ब्याजदरको तुलना नगरेको कारण र आफूले गरेको लगानीमा कम्पनीको प्रगति र त्यसको बजार मूल्यलाई नहेर्ने गरेको कारण पनि ब्याजदरको प्रभाव बजारमा देखिने गरेको रानाभाटले बताए। ब्याजदर र सूचकलाई भन्दा पनि कम्पनीको प्रगति र त्यसको बजार मूल्यलाई हेरेर लगानी गर्ने हो भने अहिले पनि मुद्दतीमा भन्दा शेयर बजारमा नै बढी लाभ लिन सकिने उनले जिकिर गरे। लगानीकर्ताहरूले धैर्य गर्दै आजको आजै बजार बढ्ला भन्दा पनि ६ महिनादेखि एक वर्षको रणनीति बनाएर लगानी गर्नु पर्ने रानाभाटले सुझाए।
शेयर बजार दिएको अवसरलाई राम्रोसँग पहिचान गर्दै रणनीति बनाएर लगानी गर्नेहरूले एक महिनामा नै बैंकको भन्दा राम्रो पूँजीगत लाभ आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहने लगानीकर्ता नयन बास्तोलाको भनाई छ। त्यसैले लगानीकर्ताहरूले बजारबाट पैसा झिकेर निक्षेपमा नराख्नेमा बास्तोलाको विश्वास छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको पनिसँगै बढ्न सक्ने भएकाले केही दबाब पर्ने भएको कारणले बजार प्रभावित हुनु परेको उनको बुझाई छ। बैंकको ब्याज भनेको सामान्य हो। बढ्ने घट्ने भइरहन्छ र ब्याजदर दीर्घकालीन नभएको कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनु भन्दा कम्पनीहरूको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा बास्तोलाको जोड छ।
अवसर पहिचान गर्नसके शेयरबाट निक्षेपभन्दा धेरै रिर्टन पाईने बैंकको निक्षेपमा गरिने लगानी तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित भएतापनि बजारको जोखिम बहन गर्ने क्षमता राख्ने लगानीकर्ताले राम्रो रिर्टन पाउन सक्ने उनकाे भनाई छ।
ब्याजदर र सूचक एक अर्काका विपरीतार्थ देखिनुमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नै सबैभन्दा हाबी रहेको देखिन्छ। बजारले राम्रो प्रतिफल दिँदा दिँदै पनि ब्याजदरको कारण बजार प्रभावित हुन्छ भन्ने गरी मानसिकता लगानीकर्तामा देखिएकै कारण बजारमा शेयर बजार र ब्याजदर विपरीतार्थ हुन पुगेका हुन्। जसका कारण पछिल्लो समय निरन्तर रुपमा बढी रहेको बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर वृद्धिले ठुलै क्षति ब्यर्होनु पर्‍यो। जुन वास्तविक भन्दा मनोवैज्ञानिक रहेको माथिको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। merolagani